भूकम्पले क्षति भएका स्वास्थ्य संस्था निर्माणको काम बल्ल सुरु | Ratopati
भूकम्पले क्षति भएका स्वास्थ्य संस्था निर्माणको काम बल्ल सुरु
personअञ्जु तामाङ exploreकाठमाडौं access_timeमाघ २, २०७५ chat_bubble_outline0
काठमाडौँ । आज देशभर राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइँदैछ । यो दिवस मनाउँदै गर्दा जो कसैलाई पनि तीन वर्षअघिको भूकम्पको सम्झना आउँछ । २०७२ वैशाख १२ को ७.८ म्याग्निच्युटको ठूलो भूकम्प र त्यसका पराकम्पनहरूमध्येका सबैभन्दा ठूलो वैशाख २९ को पराकम्पनबाट नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र पनि प्रभावित बन्यो ।
भूकम्पले ३१ जिल्लाका १ हजार १ सयभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा क्षतिग्रस्त बन्न पुगे, जसमध्ये अति प्रभावित १४ जिल्ला र अन्य जिल्ला गरी ५ सय ४४ स्वास्थ्य संस्था पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भए ।
भक्तपुर, धादिङ, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, मकवानपुर, रसुवा, सिन्धुली रामेछाप, ओखलढुङ्गा, काठमाडौँ, गोरखा र नुवाकोट २०७२ को भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लाको सूचीमा परेका छन् । यी जिल्लामा रहेका ८ सय ९६ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ३ सय ६१ पूर्ण क्षति र ३ सय १ आंशिक क्षति हुन पुगे ।
भूकम्पपछि ती जिल्लामा तत्काल सेवा दिन सरकारले अस्थायी भवन बनाए पनि स्थायी भवन भने अहिलेसम्म बनेका छैनन् ।
हुन त सरकारले पूर्ण रूपमा क्षति भएका ५ सय ४४ वटा पक्की भवन वि.सं. २०७८ सालसम्म निर्माण गरिसक्ने जनाएको छ । तर यो लक्ष्य पूरा गर्नेगरी काम हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म एक दुईबाहेक पक्की भवन निर्माण हुन नसकेबाटै लक्ष्य पूरा नहुने सङ्केत देखिन्छ । भूकम्प गएको ३ वर्षपछि मात्रै पक्की भवन निर्माण सुरु भएको छ ।
पक्की भवन निर्माण बल्ल सुरु
भूकम्पपछि क्षति भएका स्वास्थ्य संस्था निर्माणमा ४५ वटा दातृनिकायले सहयोग गर्दै आएका छन् । जाइकाको सहयोगमा केन्द्रीय अस्पताल प्रसूतिगृह र वीर अस्पताल निर्माण कार्यको अन्तिम चरणमा छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक प्रनय उपाध्ययका अनुसार सामान्य क्षति भएका स्वास्थ्य संस्था हजारभन्दा धेरै छन्, जसको मर्मत सकिएको छ । विगत ३ वर्षको अवधिमा सामान्य क्षति भएका स्वास्थ्य चौकी मर्मतको काम झण्डैझण्डै सकिएको उपाध्याय बताउँछन् ।
मन्त्रालयले पक्की भवन निर्माणको काममा यस आर्थिक वर्षदेखि गति लिएको छ । विभिन्न दातृनिकायको सहयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहकार्यमा ४५ वटा पक्की भवन निर्माण भइरहेको मन्त्रालयको दाबी छ ।
सेवा प्रभावित हुन नदिन सुरुमा टेन्ट, त्यसपछि अस्थायी टहरा र अन्तिममा पक्की भवन निर्माण गर्ने सरकारको योजनाअनुसार यो वर्षदेखि पक्की भवन निर्माणलाई तीव्रता दिइएको हो ।
२ सय ६४ बनाइसक्नुपर्ने
पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयका इन्जिनियर रूपन शाहका अनुसार यो वर्ष २ सय ६४ वटा स्वास्थ्य संस्थाको पक्की भवन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण गर्ने जिम्मा लिएर केहीको निर्माण सुरु भइसकेको र कुनैको टेन्डर प्रक्रिया सुरु भएको छ । २ सय ६४ मध्ये नेपाल सरकारले ५३ वटा पक्की भवन निर्माण गर्नुपर्ने छ भने अन्य १ सय ५६ वटा भारत सरकारको अनुदानमा बनाउने तयारी छ ।
नेपाल सरकारले बनाउने ५३ वटा प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा दुई करोडको दरले १ अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । १५ महिनाभित्रमा भवन निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माण गर्ने काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा युरोपियन युनियनको सहयोगमा ५ सय आंशिक क्षति भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूको मर्मत र केही प्रिफ्याब (अस्थायी) भवन बनाउँने योजना स्वीकृत भई २ सय ९८ वटा संस्था संस्थाको मर्मत कार्य सम्पन्न भएको थियो । त्यस्तै आ.व. ०७४÷०७५ मा सयवटा स्वास्थ्य संस्थाको मर्मत कार्य भएको थियो ।
पूर्ण रूपमा क्षति भएको स्वास्थ्य संस्थाको जग्गामा अस्थायी भवन निर्माण गरेको र पक्की भवन निर्माणको लागि ठाउँ अभाव भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । जग्गा अभावले भवन निर्माणको काम अगाडि बढ्न केही कठिन भएको उसको दाबी छ । जग्गा खरिद गर्ने नीति नभएकाले स्वास्थ्य भवन निर्माणका लागि सार्वजनिक जग्गामा नेपाल सरकारले अनुमति दिनुुपर्ने वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक उपाध्ययाको भनाइ छ । ‘जग्गा अभाव हुँदा भवन निर्माणको काम सोचेजसरी अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रिफ्याब अर्थात् अस्थायी हटरा ३ सयवटा बनाएको छ’, उपाध्यायले रातोपाटीलाई बताए । आ.व. ०७३÷०७४ देखि स्वास्थ्यका भवन निर्माण गर्ने जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुनर्निर्माणलाई दिएको छ ।
यसरी बन्छन् नयाँ भवन
जनसङ्ख्या, बजार क्षेत्र, बिरामी र सडकलाई ख्याल गर्दै स्वास्थ्य चौकी र अस्पताल निर्माण गरिनेछ । त्यसका लागि प्राधिकरणले वर्गीकरण नै गरेको छ । अस्पताल एबीसीमा पनि १, २, ३ र ४ गरेर विभाजन गरिएको छ भने स्वास्थ्य चौकीलाई १, २, ३ र ४ गरेर विभाजन गरिएको छ ।
जाइकाले निर्माण गर्दै गरेको वीर र प्रसूतिगृहलाई ४ अर्ब जापानिज रकम छुट्याएको छ । यस्तै केएफडब्लूले बनाउने ४ वटा स्वास्थ्य संस्थाका लागि १० मिलियन युरो छुट्याएको छ । फेरि केएफडब्लूले नै थप ९ वटा भवन निर्माण गर्ने भनिएको छ, जसका लागि पनि १० मिलियन युरो नै छुट्याएको छ । यूएसएआईडी, जाइकालगायत नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय गरी भूकम्पपछि क्षति भएका स्वास्थ्य संस्था निर्माणको लागि ४५ वटा संस्थाहरूले सहयोग गरेका छन् ।
२४ वडा स्वास्थ्य चौकीविहीन
भूकम्प प्रभावित स्वास्थ्य संस्था निर्माणका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण, सरकार र दातृनिकायको सहयोग छ । तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको ठूलो समस्या भनेको नियमित निर्माण गर्नुपर्ने भवन हो ।
सङ्घीयतापछि नियमित निर्माण गर्ने भवन कसले बनाउने, कहाँबाट बनाउने जस्ता विषय स्पष्ट नहुँदा भूकम्पले क्षति भएको स्वास्थ्य संस्थाभन्दा ठूलो समस्या उब्जिएको उपाध्याय बताउँछन् ।
मुलुक सङ्घीय अभ्यासमा गएपछि २ हजार ४ सय स्थानीय निकायका वडाहरूमा कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित कार्यक्रम मार्फत वार्षिक ५ सय स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण तथा मर्मत गर्दै आइरहेको जनाएको छ ।
तर सङ्घीयता संरचनामा गएपछि मर्मत तथा निर्माणको काम स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन । यसले पनि केही समस्या आएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । गत वर्षदेखि सरकारले नयाँ भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन नगरेपछि भवन निर्माणको काम अलपत्र परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका वरिष्ठ प्रशासक उपाध्यय भन्छन्, ‘भूकम्पले क्षति पुर्याएको ५ सय ४४ भवनभन्दा क्षति नपुर्याएको जिल्लाहरूमा धेरै भवन निर्माण गर्नुपर्ने छ । सरकारको स्वास्थ्य भवन निर्माणका लागि निरन्तर वार्षिक कार्यक्रममा आउँने बजेट गत वर्ष र यो आर्थिक वर्ष पनि आएन ।’ ३ हजार उपस्वास्थ्य चौकी स्वास्थ्य चौकी परिमार्जन भएपछि २४ सय वडा स्वास्थ्य चौकीविहीन भएका हुन् ।
काठमाडौँ उपत्यकामा जोर विजोर नियममा थप कडाई
भारतद्वारा इलाममा ३१ मिलियन लागतमा संस्कृत विद्यालय निर्माण
महानगरीय अपराध महाशाखाको सर्वसाधारणलाई अनुरोध
पुनद्वारा विप्लव समूह परित्याग
फ्रान्सले हुवावेमाथि कडाई गरेपछि चीनको प्रतिक्रिया
‘कोभिड–१९ सङ्क्रमितको उपचारमा टीसीएम विधि प्रभावकारी’
दिल्लीमा सङ्क्रमणमुक्त हुनेको दर ७२ प्रतिशत
बाँदर धपाउने यन्त्र वितरण